Suuqgeynta Saameynta Instagram ▷ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Suuqa Soo Iibsiga ee Bartilmaameedka
December 16, 2018 0 comments 1085
Xayeysiiska Facebook, e-buugaagta, suuq geynta YouTube, Twitter iyo boggaga internetka ayaa ka mid ah qaabab suuq geyn oo cusub oo soo baxa maalin kasta ama usbuuc kasta, runtiina, waxay shirkadaha ka caawiyaan inay kordhiyaan kalsoonidooda iyo Suuqa Soo Iibsiga ee Bartilmaameedka.
Laakiin waxay noqon kartaa wax xiiso leh in la garto nooca istiraatiijiyadaha suuq-geynta moodalka dhabta ah. Waxaan ognahay inay jiraan hal shay oo xukuma dhammaan qaababkan: Suuqgeynta Iker, sax! Laakiin muxuu yahay isku xirnaanta suuqgeynta ee Influencer Suuqgeyn ay ku leedahay Suuqa Suuqgeynta 'Instagram'?
Haddii aadan aqoon u lahayn waxay tahay Influencer Suuq, waa nooc suuq geyn ah oo diiradda saaraya adeegsiga danjirayaasha muhiimka ah si loogu faafiyo fikradda iyo farriinta astaantaada astaan ​​u leh dhagaystayaashaada, suuqa bartilmaameedkaaga iyo, suurtagal ahaan, suuq ballaaran.
Instagram waxay leedahay in kabadan 300 milyan oo isticmaale bille ah, iyo 70% dadka isticmaala Instagram waxay horey u raadinayeen magacyada buugaagta isku midka ah ee doonayay inay kiciyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Taasi waa sababta ay Suuqgeynta Instagram ayaa wax ku ool u ah ganacsigaaga Ganacsiga elektaroonigga ah haddii si sax ah loo isticmaalo.
Halkii aad si toos ah ugu fidin laheyd koox macaamiil ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad shaqaaleysiiso oo aad ku dhiirigeliso dadka saameyn ku leh inay ereyga kuu faafiyaan.
Saamaynta suuqgeynta ee Instagram
Hagaag, Instagram waxay noqotay meel loogu talagalay dadka saamaynta ku leh, inbadan oo kamid ahi waxay ku kordhiyeen dhagaystayaashooda min min ilaa malaayiin waqti gaaban gudaheed. Kuwa caanka ah ee internet-ka ayaa awood weyn ku leh dhagaystayaasha sii kordhaya ee macaamiisha isku kalsoon.
Waxay saameyn weyn ku leeyihiin dhagaystayaashaada waxayna saameyn karaan isbeddelada ugu dambeeyay ee la heli karo. Haddii aad la shaqeyneyso iyaga? Waxaad ku dardargelin kartaa horumarinta wax soo saarkaaga waqti gaaban gudaheed.
Wixii ah shirkadaha, waa inaad bilowdaa inaad aqoonsato dadka ku habboon ee Influencer ka shaqeeya. Tani waa, hab ahaan, waa qaybta aan dulqaadan karin ee geedi socodka oo dhan. Ma dooneysid inaad wax uun wax uun ka garabsatid marxaladdaan, maxaa yeelay waxay saameyn ku leedahay dhammaan waxaaga Istaraatijiyad suuq. Xusuusnow, haddii kuwa wax saameyn ku leh aysan jeclaan inay la shaqeeyaan astaantaada, ka dibna jooji inaad ka farxiso, uma baahnid inaad riixdid xiriir si aad saameyn ugu yeelatid aaladda.
Haddii aad sii wadato tuugsiga, waxay u badan tahay inay si been ah u ammaanayaan sheygaaga. , oo ku dhammaanaya faallooyin badan oo dhahaya "spam" dhagaystayaasha. Markaad hesho qofka ugufiican mashruucaaga, u bandhig inaad sameyso olole tijaabo ah kahor intaadan dhex galin xiriirka.
Adeegsiga aaladaha Falanqaynta Instagram Waa muhiim in lala socdo cabbiraadaha muhiimka ah sida faallooyinka, ballanqaadyada iyo wicitaanka ficil saameyn weyn ku leh ganacsigaaga.
Waa inaad maskaxda ku haysaa inaad ka qeybgashid kooxdaada quseeya istiraatiijiyadda ololaha, si aad u cusbooneysiiso ololahaaga. Haddii aad tan si hufan u gaarto, la yaab naftaada natiijada iyo faa'iido in ay suuqgeynta ayaa ku yeelan karta ganacsigaaga.
ka Suuqa Soo Iibsiga ee Bartilmaameedka Waa adeegsadeyaal dhagaystayaal muhiim ah oo noqon kara mid ka mid ah macaamiishaada.
Waxbadan ayaan kaaga soo sheegnaa Instagram TV.
1 Suuqa Soo Iibsiga ee Bartilmaameedka
1.1 Saamaynta suuqgeynta ee Instagram
4 ee codsiyada ugu fiican ee sawirrada Instagram
Erayada loogu talagalay Instagram 【Kuwa ugu wanaagsan '70】